တစ်ငှက် - သတ္တဗေဒ. အင်္ဂလိပ် အ‌ခေါ်အားဖြင့် တစ် တစ်‌မောက်
တစ်ငှက် - သတ္တဗေဒ. အင်္ဂလိပ် အ‌ခေါ်အားဖြင့် တစ် တစ်‌မောက် တွမ်တစ် ဟု‌ခေါ်‌သောငှက်သည် ‘ပယ်ရိဒီ’မျိုးရင်းတွင်ပါဝင်သည်။ အလွန် ‌သေးငယ်‌သော ငှက်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာအရပ် ..
ကြာဖက်နင်း ဆိုသည်မှာ ရှည်လျားသော ခြေချောင်းများရှိကာ ကြာဖက်များပေါ်တွင် ထိုခြေချောင်းတို့ဖြင့် ဖြန့်ကားသွားလာနိုင်သော ငှက်ကို ဆိုလိုသည်။ ဘီငှက်. ဘီကျားငှက်.
င က မ ပ င Aves သည အမ အတ င ရ အတ င ပ န စ ဖက ရ သ သ န သတ တဝ အမ အစ တ င ပ ဝင သည သ သ အ လ ပ သန န င စ မ မရ က ပ
အ င လ င င က သ ယ င ယင င က ဟ လည ခ သည ယ င ယင င က က အ င လ င င က ဟ လည ခ တတ က သ သည ပ ဏဗ ဒအလ အရ ဗ က ရ စဗ င က နစ ဟ ခ ဗ က ရ တ ဒ
င က တစ က င မ တစ စင ဟ သည မ မ န မ စက ပ တစ ခ ဖ စ သည င က တ င လ လ ပင င က ခတ သမ တ အန တရ ယ က င တစ န မဟ တ တစ န မ တစ စင စင သင န င သက သ
ဥပန င က သည တင က င က မ တ င ပ ဝင သည ဥပန င က က အန ဟင ဂ မ င က အမ ရ ကန ဥပန င က ရ က က ဆင ဟ ခ က ပ ရ န ပ င က တစ မ ဖ စ က အမ ရ က တ က
မ န မ န င င တ င သစ တ က င က အမ မ ရ သည သစ တ က င က သည ပ စ ဖ မ မ စဉ တ င ပ စ ဒ မ ရင ပ ဝင သည လ သ မ သ သစ တ က င က မ က သတ တဗ ဒ ပ ဏဗ ဒ
ဆ င ခ င က ဆ သည မ ကမ ဘ ရ သ ဥတ အပ င အလ က င င က မ သည တစ န ရ မ တစ န ရ သ ခ တ တပ င ရ န ထ င သ င က မ က ခ ဆ သည ကမ ဘ အအ ပ င ဒ သရ
အခ က ပ အထ တ ရသည က န တ မ ပ မ န တ ရသ င က မ ဖ စ သည ယ ဘ ယအ ဖ င တစ က င တည န လ ရ သ လည အ ပ စ လ က လည တ န င သည အဖ မ မ
မ က မ လ စ သ င က တ တ င က ဝ ဟ အမည တ င သ င က မ သည အသ င အ ဖ င အ ဩ ဖ ယ ရ အက င ဆ သ င က မ ဖ စ သည က ဝ င က က နယ ဇ လန က န
ဘ င က သည က ဖက နင င က အမ အစ ဖ စ သည က ဖက နင င က က အ န ဒ ယန င င မ န မ န င င န င အရ အ ရ တ က တစ ခ င တ င တ ရသည အလ လက မမ
အစ ထ ပ ဇ ပသန င ခ င ရ လ သည သမ မ က မ စ တ င ခ က အပ စ ကင သ င က ဟ ဖ ပ ထ သည အတ င ထ စဉ က ဟ ဗ လ မ တ သည ခ က အမ တ တန ထ ခ က င
အသ က မ က သ သ င ပ င တ င တစ စ တစ ဝ ပ လ ပ တတ က သည သ င တင င က အ ပ အန သ ကပ သ လ င အထ ပင လန ဖ ပ သ က သည အခ င က မ သည ရ ပ တ င ရ ပ ပ ပ လ င
ဇ ဝ ဗ ဒအလ အရ တ လ င က သည စတ စ ဂ ဖ မ မ စဉ တ င င စတ စ ဂ ဒ မ ရင တ င င ပ ဝင သည မ န မ န င င တ င က က ဝက ခ က က င အမည ဖ င
ဇ င က သည တင မလ င အ ဒ မ ရင တ င ပ ဝင ပ ဏဗ ဒအမည မ တ ဒ က ဒ ဂ လ ရစ ဖ စ သည ဇ င က သည ဝ လက မခန ရ အမ တစ ခ တည ကပင လက မ
ဝ ပ င က အ ပ မ က မ န မ န င င မ စ မက မ ကမ ခ တစ လ က န င ထ အ င မ ပတ ဝန က င တ င အစဉ မပ တ တ ရသ လည မည သည န ရ တ င သ ပ က သည ဆ သည က မ
င က ခ င ရ အင ဂလ ပ Hngetchaung သည မက တ င ဒ သက ဂန ဂ ခရ င ဆ မ နယ င က ခ င က ရ အ ပ စ တည ရ သည ရ န ရ က တ မ ဖ စ သည
ခ ည ခင စ တ င က သည က မ သ ရ င က တစ မ ဖ စ သည င က က မ ရင တ င ပ ဝင သည သ ပ ပ အမည မ စ က န ယ အက ပ စက ပတ ဖ စ သည သ ပ က ရ တ င တစ က င ခ င
င က ယ င ရ အင ဂလ ပ Hngetyawng သည ရ မ ပ ည နယ မ က ဝ က ယ ပ င အ ပ ခ ပ ခ င ရတ င မက မန ခရ င မက မန မ နယ င က ယ င က ရ အ ပ စ
စ န သတ တ ထ တစ ခ မ က မ င စ က င ကင ပ သန န န င ခ င ဖ စ သည စ န အ ရ တ တစ ရက လ က မ ရန ခ ယဉ လ သည ပ သန ရ မည သည င က န င မဆ ယ ဉ ပ င န င သ
မ စ င က သည ပ လ င က ဇ ဝဇ င က တ န င အတ အပ ဒ ဒ မ ရင တ င ပ ဝင ပ ဏဗ ဒအမည မ ဆစ ပစ အ ရတ ပ ဗတ အင ဖ မ တပ ဖ စ သည အလ လက မ
င က သ ခ သည မ လ င က တစ မ ဖ စ သည ပ ဏဗ ဒ အမည မ မ န တ က လ ဆ လ တ ရ ယပ အက ဖ နစ ဖ စ သည ဗ လ တ မင တ အစရ သ အဆ က အအ မ ခ င မ ပ တ င
င က ခ ရ အင ဂလ ပ Hngetkhway သည မက တ င ဒ သက ပခ က က ခရ င ဆ ပ ဖ မ နယ င က ခ က ရ အ ပ စ တည ရ သည ရ န ရ က တ မ ဖ စ သည
င က ထယ ရ အင ဂလ ပ Hngethtei သည ရ မ ပ ည နယ မ က ဝ က ယ ပ င အ ပ ခ ပ ခ င ရတ င မက မန ခရ င န ဖန မ နယ င က ထယ က ရ အ ပ စ တည ရ သည
င က ပ က င ရ အင ဂလ ပ Hngetpyarkyin သည မက တ င ဒ သက ဂန ဂ ခရ င ဆ မ နယ င က ပ က င က ရ အ ပ စ တည ရ သည ရ န ရ က တ မ
က က င က ရ အင ဂလ ပ Kyaukhnget သည ရ မ ပ ည နယ တ င ဓန က ယ ပ င အ ပ ခ ပ ခ င ရဒ သ ရ င မ နယ က က င က က ရ အ ပ စ တည ရ သည ရ န ရ က တ မ
စစ တစ လ င င က က ခ င တလ င ဟ လည ခ သည ထ င က သည တစ တ တ န င အတ ဗင နယ လင န မ ရင ခ တ င ပ ဝင သည ပ ဏဗ ဒအမည မ ဟ လ တ ရပ စပ င န ဆပ
ဝမ ဘ တစ မ ဖ စ ကမ ဘ အရ ပ င ဒ သမ တ င န ထ င ရ အ င ရ ကန မ တ င က က စ လ ရ သည မ န မ န င င အမ တမ န ထ င သ င က တစ မ ဖ စ
င က ပ က ရ အင ဂလ ပ Hngetpyargyi သည မက တ င ဒ သက ပခ က က ခရ င ဆ ပ ဖ မ နယ င က ပ က က ရ အ ပ စ တည ရ သည ရ န ရ က တ မ
ဝ ဖတ လ င က
င က လ ကထ တ င ထ ဆန အ ဩဖ ယ က င သ င က တစ မ မ ကလ င င က Secretary Bird ဖ စ သည ထ င က ဦ ခ င န က တ င မည နက သ အတ င ရ ည မ သည မတ ထ င လ က ထ က
ဂန နက င က သည သမပ င ပင လယ တ င က က စ သ စ လ ဒ မ ရင ဝင င က က တစ မ ဖ စ သည တင က န င အတ ပယ လ ကင န ဖ င မ စဉ တ င ပ သ လည အသ င
တစ်ငှက်, သတ္တဗေဒ. တစ်ငှက်,